Tilmaamaha rakibida Fedora 31 ee loogu talagalay Newbies | Laga soo bilaabo Linux
Tilmaamaha rakibida Fedora 31 ee Newbies
Fedora shaki la'aan waxay noqotay mid kamid ah qeybinta ugu adag Linux iyo in sidoo kale ay leedahay bulsho badan oo isticmaala oo taageera. Iyadoo nooc kasta ee qaybinta horumarinno kala duwan ayaa lagu daraa oo ka sarreeya marwalba waxay ku saabsan tahay fududeynta howlaha. Kaasi waa kiiska rakibaaddaada maaddaama hawshu ay wax badan hagaajisay oo wixii ka sarreeya ay isku dayeyso inay noqdaan sida ugu macquulsan.
Taasi waa sababta Maqaalkan waxaan ku qaadan doonaa fursad aan kula wadaago dhammaan kuwa cusub iyo dadka aan wali isku dayin tan wanaagsan ee Linux, sida loo rakibo nidaamkaaga. Maaddaama nooca cusub ee Fedora 31 dhowaan la soo saaray (waxaad ku ogaan kartaa faahfaahintiisa xiriirka soo socda).
Hagahan waxaa loogu talagalay dadka cusub, laakiin waxaa muhiim ah inay maanka ku hayaan inay tahay inay lahaadaan aqoonta aasaasiga ah si ay u awoodaan inay abuuraan shey dhexdhexaad ah oo leh disto iyo inay gartaan sida loo dhigo kombuyuutarkooda.
1 Soo dejinta iyo diyaarinta warbaahinta rakibaadda
1.1 Warbaahinta rakibaadda CD / DVD
1.2 Dhexdhexaadiyaha USB-ga
2 Sidee loo rakibaa Fedora 31?
Soo dejinta iyo diyaarinta warbaahinta rakibaadda
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan soo dejino sawirka nidaamka, oo aan ku duubi karno DVD ama USB drive, waxaan ka soo dejineynaa degelkiisa rasmiga ah. xiriirka halkan.
Marka tan la sameeyo waxaan ku sii socon doonnaa abuurista qalabka wax lagu rakibo.
Warbaahinta rakibaadda CD / DVD
Windows: Waxaan ku gubi karnaa iso Imgburn, UltraISO, Nero ama barnaamij kasta oo kale xitaa iyaga oo aan ku jirin Windows 7 markii dambena waxay na siineysaa ikhtiyaar aan xaq ugu gujino ISO.
Linux: Waxaad isticmaali kartaa gaar ahaan midka ku yimaada jawiga garaafka, waxaa ka mid ah, Brasero, k3b, iyo Xfburn.
Windows: Waxaad isticmaali kartaa Universal USB Installer ama LinuxLive USB Creator, labaduba way fududahay in la isticmaalo.
In kasta oo ay sidoo kale jiraan qalab ay kooxda Fedora si toos ah noo siiso, ayaa loo yaqaan Qoraa Fedora Media laga bilaabo bogga 'Red Hat' halkaasoo ay ku sharraxayso sida ay u shaqeyso.
Linux: Xulashada lagu taliyay waa in la isticmaalo amarka dd, kaas oo aan ku qeexeyno wadada aan ku leenahay sawirka Fedora iyo waliba barta aan ku leenahay korkeena.
Guud ahaan wadada aad u socoto pendrive badanaa waa / dev / sdb tan waxaad ku hubin kartaa amarka:
Horey ayaa lagu gartay inaad kaliya fulinayso amarka soo socda
Sidee loo rakibaa Fedora 31?
Horey ayaa loo diyaariyey qalabka rakibida, waxaan sii wadaynaa inaan ku xirno kumbuyuutarkayaga. Inta lagu guda jiro rarka tan, shaashad ayaa soo muuqan doonta halka aan ka heli doonno ikhtiyaarka koowaad ee ah in si toos ah loo tijaabiyo nidaamka. Wax walba oo lagama maarmaan u ah in nidaamka lagu socodsiiyo habka Live-ka ah waxaa lagu rakibayaa kumbuyuutarka waana ku dhex jiri doonnaa.
Ku sheeg gudaha desktop-ka nidaamka waxaan arki karnaa hal astaan ​​oo leh magaca "Rakib". Waxaan ku fulineynaa tan adigoo labo jeer ku riixaya ama dooranaya oo riixaya furaha gala.
Tan ayaa la sameeyay saaxir rakibaadda ayaa furi doonta, halkaa shaashadda koowaad Waxay na weydiin doontaa inaan xulno luuqadeena iyo waliba dalkeena. Marka tan la sameeyo, waan sii wadeynaa.
Tani waxay na toosin doontaa menu-ka weyn ee saaxir rakibaadda. Halkan waxaan ku arki karnaa dhowr ikhtiyaar oo labadooda midkood si otomaatig ah loo qaabeyn doono ka dib markii aan qaabeynay doorashadii hore. Haddii ay dhacdo aagga waqtiga, qaabka kumbuyuutarka ama luqadda maahan kan aad u baahan tahay, waad beddeli kartaa dejimaha kuwan ku yaal xulashooyinka lagu muujiyey sanduuqyada lagu muujiyey casaanka.
Haddii ay wax waliba hagaagaan ama aad horeyba u qaabeysay xulashooyinka. Hadda waa inaan gujino "halka rakibaadda".
Halkan waxaa naloo siiyay suurtagalnimada dooro nooca disk-ka adag iyo habka loo rakibayo Fedora.
Markaad dooranaysid diskiga adag, xulashooyin kaladuwan ayaa lagu kartiyeeyaa qaybta ka hooseysa. Kuwaas oo aan ikhtiyaar u leenahay in saaxirku si toos ah ugu rakibay rakibida, asal ahaan waxa ay sameyn doonto ayaa ah masaxida dhamaan diskka si loo rakibo Fedora.
Labada kale waa xulashooyinka caadada ah ee aan nafteena ku maareyno qormooyinkeena, xajineyno diskiga adag, tirtirno qaybaha, iwm. Ikhtiyaarka lagu taliyay haddii aadan rabin inaad lumiso macluumaadka.
Halkan waxaan kugula talineynaa inaad doorato midka ugu dambeeya (Advanced Custom) maadaama saaxir rakibida uu muujinayo dhamaan qeeybaha diskiga, dhibcahooda sii kordhaya iyo xulashooyinka aan ku qaban karno hal shaashad. Taasi waxay ka duwan tahay xulashada kale, midkani wuxuu ku tusayaa ikhtiyaariyada qaabka liistada hoos-u-dhaca wuxuuna u muuqdaa inuu wareersan yahay qaar.
Si loo abuuro qayb Fedora ah ama loo isticmaalo mid jira oo loogu talagalay Fedora, waxaan dooran doonnaa oo aan ku saxnaaneynaa. Sidaad arki karto, menu ayaa furi doona kaas oo noo oggolaanaya inaan tirtirno qaybta, abuurno qayb ama u qaabeyno.
Qaybta loogu talagalay Fedora waxaan ku siineynaa qaab "ext4" iyo dhibic buur "/". Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad kala saarto qodobbada kale ee buurta, waa inaad midba qayb u qaybisaa, tusaale ahaan "/ boot", "/ home", "/ opt", "swap". Iwm
Horaan u qeexay tan, waxaan riixeynaa wixii la qabtay waxaana u laabaneynaa shaashadda weyn saaxir rakibaadda, halkan badhanka rakibida waa la awoodsiin doonaa hawshana way bilaaban doontaa.
Dhamaadka kaliya waa inaan ka saarnaa warbaahinta rakibida oo aan dib u bilowno.
Bilaabida nidaamka Saaxir qaabeynta ah ayaa lagu ordi doonaa halkaas oo aan ku habeyn karno adeegsadeheena nidaamka lambarka sirta ah.
Sidoo kale awood u siinta ama curyaaminta qaar ka mid ah dejinta asturnaanta iyo isku xirnaanta xisaabaadka emaylka qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Tilmaamaha rakibida Fedora 31 ee Newbies
Maarshooyinka 69 dijo
Waxaan isku dayay inaan ku tijaabiyo Fedora 31 Workstation on Vbox oo leh Linux Mint Tina Cinnamon laakiin waxay umuuqataa in arimuhu aysan soo kordhin. Wax walba si fiican ayaa loo qaabeeyey. Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto qaladka darawallada nacasnimada sawirada Nvidia, laakiin wixii aan ku arkay YouTube, uma muuqdo wax xun. Waxaan door bidaa x Mint iyo Manjaro badan. Salaan!
Tizen OS 5.5 Falanqeynta Labaad ayaa la fasaxay
WhatsApp ayaa dacwad ku oogtay NSO Group basaasnimada internetka